ကိုယ့်ချစ်သူက သူ့အရင်ကောင်မလေးနဲ့ပြန်ပြီးအဆက်အသွယ်ရှိနေတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ? – Trend.com.mm
ကိုယ့်ချစ်သူက သူ့အရင်ကောင်မလေးနဲ့ပြန်ပြီးအဆက်အသွယ်ရှိနေတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ?
တကယ်လို့များကိုယ့်ရဲ့ ချစ်သူက သူ့ရဲ့အရင်ကောင်မလေး၊အရင်ချစ်သူနဲ့စကားပြောဆိုဆက်ဆံနေ တုန်း ဆိုတာသိလိုက်ရရင် ဘယ်မိန်းကလေးမဆို စိတ်မှာခိုးလိုးခုလုဖြစ်သွားမှာပါပဲ။ အရင်ကောင်မလေးကို ချစ်နေတုန်းလား။သူ့ကိုကစားနေတာလား၊အရင်ကောင်မလေးဆီ
ပြန်သွားတော့မှာလားစသဖြင့် အကြောင်းအရာမျိုးစုံကသင့်စိတ်ကိုဒုက္ခပေးနေတော့မှာပါ။ သံသယဆိုတာသိတဲ့အတိုင်း တစ်ခါဝင်ပြီးရင် ဆက်တိုက်ကိုသံသယ၀င်နေမိတော့တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ လေ့လာချက်တွေအရတော့ ချစ်သူကောင်လေးက သူ့ရဲ့ အရင်ကောင်မလေးနဲ့ စကားပြောဆို ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာပြတ်သွားကြပေမဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။ အဲ့ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေအဖြစ်ဆက်ပြီးစကားပြောဆိုဆက်ဆံနေကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
သူ့ရဲ့ အရင်ကောင်မလေးနဲ့ အွန်လိုင်းမှာစကားပြောနေမယ်။တစ်ခါတစ်လေဖုန်းဆက်ထားတွေ တွေ့ရမယ်။စကားပြောရမယ့် အကြောင်းရင်းများစွာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။စိတ်ပူစရာမလိုတာ လည်းဖြစ်နိုင်သလို စိတ်ပူမယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ပူရမယ့်အခြေအနေတွေပေါ့။ဒါပေမဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းကသူတို့ချစ်သူ အရင်တစ်ယောက်ကိုသံယောဇဉ်မပြတ်သေးမှာ၊ အရင်လူဆီပြန်သွားချင်နေမှာကို ထိတ်လန့်စိုးရိမ်ကြတာလည်း အပြစ်တော့မဆိုသာပါဘူး။
တကယ်လုိ့သင့်ချစ်သူကသူ့အရင်ကောင်မလေးနဲ့စကားပြောဆိုနေတုန်း၊ဆက်သွယ်နေတုန်းပဲလို့သင်သိတဲ့အချိန်မှာ သင်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့အရာကသူ့ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးလိုက်ဖို့ပါပဲ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုဆက်ဆံတာက အဆင်ပြေချောမွေ့တဲ့ချစ်သူဆက်ဆံရေး ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်တစ်ခုပါ။သူက သူ့ရဲ့ အရင်ရည်းစားနဲ့အွန်လိုင်းမှာ စကားစပြောဖြစ်ကတည်းက သင့်ကိုပြောပြမယ်။ဒါမှမဟုတ် သူတို့စကားပြောနေတာကို သင့်ကိုလည်းပြန်ပြမယ်ဆိုရင် ဒါက သူ့ဘက်က ဘာမှဖုံးကွယ်ထားစရာမရှိဘူး။အရင် ရည်းစားနဲ့က သူငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်လို့ စိတ်ပူစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။သူပြောပြတယ်ဆိုတာကလည်း
နောက်ကျမှသင်သိသွားရင် သင်ဝမ်းနည်းရမှာစိုးလို့၊စိတ်အဆင်မပြေမှာစိုးလို့ သင့်ဘက်က စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို သူလုပ်ပေးနိုင်သလောက်ဖြေလျှော့ပေးတာပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ ချစ်သူကိုယုံကြည်ပေးလိုက်ပါ။အဲ့ဒီလိုရှင်းပြပြောပြနေတဲ့ကြားက အရမ်းစိုးရိမ်လွန်၊ သ၀န်တွေတိုလွန်းပြီးဟိုဘက်မိန်းကလေးကိုသွားပြော၊ကိုယ့်ချစ်သူကိုလည်းဒေါသတွေထွက်၊အော်ဟစ်နေမယ်ဆိုရင် သင်တို့ရဲ့ အချစ်ရေးမှာ ဆူးငြှောင့်ခလုတ်တစ်ခုလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
သင့်ဘက်က ခံစားချက်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်သိမ်းထားဖို့ကအကောင်းဆုံးပါ။ စိုးရိမ်နေတာတွေ၊စိတ်ပူနေတာတွေ၊သ၀န်တိုနေတာတွေကို ဖွင့်မထုတ်ပဲခဏလောက်သိမ်းထားပါ။ မဟုတ်ရင်ဒီအခြေအနေကပိုဆိုးသွားပါလိမ့်မယ်။ချစ်သူအပေါ်ယုံကြည်မှု မရှိဘူးဆိုရင် အဲ့ဒီကစလို့တစ်လျှောက်လုံးဘာပဲလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်နေရတော့မှာပါ။ မယုံကြည်မှုတွေနဲ့ ရှေ့ဆက်သွားရတော့မှာပါ။
အဲ့ဒါကြောင့် Rs တစ်ခုမှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိဖို့ကအရမ်းကိုအရေးကြီးပါတယ်။သူ့ဘက်က သင့်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရိုးရိုးသားသားပြောပြနေတယ်ဆိုရင် အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ သင့်ချစ်သူကို
ယုံကြည်မှုပေးထားလိုက်ပါ။သူ့ဘက်ကရိုးသားမှုမရှိဘူး။သူ့အရင်ရည်းစားနဲ့စကားပြောထားတာလည်း ဖျက်ထားတယ်၊ဖွက်ထားတယ်၊တစ်ခြားတစ်ယောက်ကလာပြောမှ သူ့အရင်ရည်းစားနဲ့ ပြန်ပြီးဆက်သွယ် စကားပြောဆိုနေတာသိရတယ်ဆိုရင်လည်း တစ်ဖက်မိန်းကလေးကို သွားပြီးရမ်းမနေပဲ သင်တို့နှစ်ယောက်ပဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ဒေါသထွက်ရင်အမှားပါတတ်လို့ ခေါင်းအေးအေး၊သွေးအေးအေးနဲ့ စကားပြောဆိုဖြေရှင်းဖို့လိုပါတယ်။
တကယျလို့မြားကိုယျ့ရဲ့ ခဈြသူက သူ့ရဲ့အရငျကောငျမလေး၊အရငျခဈြသူနဲ့စကားပွောဆိုဆကျဆံနေ တုနျး ဆိုတာသိလိုကျရရငျ ဘယျမိနျးကလေးမဆို စိတျမှာခိုးလိုးခုလုဖွဈသှားမှာပါပဲ။ အရငျကောငျမလေးကို ခဈြနတေုနျးလား။သူ့ကိုကစားနတောလား၊အရငျကောငျမလေးဆီ
ပွနျသှားတော့မှာလားစသဖွငျ့ အကွောငျးအရာမြိုးစုံကသငျ့စိတျကိုဒုက်ခပေးနတေော့မှာပါ။ သံသယဆိုတာသိတဲ့အတိုငျး တဈခါဝငျပွီးရငျ ဆကျတိုကျကိုသံသယဝငျနမေိတော့တာပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ လလေ့ာခကျြတှအေရတော့ ခဈြသူကောငျလေးက သူ့ရဲ့ အရငျကောငျမလေးနဲ့ စကားပွောဆို ဆကျဆံတယျဆိုတာပွတျသှားကွပမေဲ့ သူငယျခငျြးတှဖွေဈနတေုနျးပါပဲ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ သူငယျခငျြးတှအေဖွဈဆကျပွီးစကားပွောဆိုဆကျဆံနကွေတာဖွဈတယျလို့သိရပါတယျ။
သူ့ရဲ့ အရငျကောငျမလေးနဲ့ အှနျလိုငျးမှာစကားပွောနမေယျ။တဈခါတဈလဖေုနျးဆကျထားတှေ တှရေ့မယျ။စကားပွောရမယျ့ အကွောငျးရငျးမြားစှာလညျးရှိနိုငျပါတယျ။စိတျပူစရာမလိုတာ လညျးဖွဈနိုငျသလို စိတျပူမယျဆိုရငျလညျးစိတျပူရမယျ့အခွအေနတှေပေေါ့။ဒါပမေဲ့ မိနျးကလေးတိုငျးကသူတို့ခဈြသူ အရငျတဈယောကျကိုသံယောဇဉျမပွတျသေးမှာ၊ အရငျလူဆီပွနျသှားခငျြနမှောကို ထိတျလနျ့စိုးရိမျကွတာလညျး အပွဈတော့မဆိုသာပါဘူး။
တကယျလို့သငျ့ခဈြသူကသူ့အရငျကောငျမလေးနဲ့စကားပွောဆိုနတေုနျး၊ဆကျသှယျနတေုနျးပဲလို့သငျသိတဲ့အခြိနျမှာ သငျအကောငျးဆုံးလုပျနိုငျတဲ့အရာကသူ့ကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး မေးလိုကျဖို့ပါပဲ။ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောဆိုဆကျဆံတာက အဆငျပွခြေောမှတေဲ့ခဈြသူဆကျဆံရေး ဖွဈဖို့ အရေးကွီးဆုံးလိုအပျခကျြတဈခုပါ။သူက သူ့ရဲ့ အရငျရညျးစားနဲ့အှနျလိုငျးမှာ စကားစပွောဖွဈကတညျးက သငျ့ကိုပွောပွမယျ။ဒါမှမဟုတျ သူတို့စကားပွောနတောကို သငျ့ကိုလညျးပွနျပွမယျဆိုရငျ ဒါက သူ့ဘကျက ဘာမှဖုံးကှယျထားစရာမရှိဘူး။အရငျ ရညျးစားနဲ့က သူငယျခငျြးတှပေဲဖွဈလို့ စိတျပူစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။သူပွောပွတယျဆိုတာကလညျး
နောကျကမြှသငျသိသှားရငျ သငျဝမျးနညျးရမှာစိုးလို့၊စိတျအဆငျမပွမှောစိုးလို့ သငျ့ဘကျက စိုးရိမျပူပနျမှုတှကေို သူလုပျပေးနိုငျသလောကျဖွလြှေော့ပေးတာပါ။အဲ့ဒါဆိုရငျတော့ သငျ့ရဲ့ ခဈြသူကိုယုံကွညျပေးလိုကျပါ။အဲ့ဒီလိုရှငျးပွပွောပွနတေဲ့ကွားက အရမျးစိုးရိမျလှနျ၊ သဝနျတှတေိုလှနျးပွီးဟိုဘကျမိနျးကလေးကိုသှားပွော၊ကိုယျ့ခဈြသူကိုလညျးဒေါသတှထှေကျ၊အျောဟဈနမေယျဆိုရငျ သငျတို့ရဲ့ အခဈြရေးမှာ ဆူးငွှောငျ့ခလုတျတဈခုလိုဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။
သငျ့ဘကျက ခံစားခကျြတှကေိုတတျနိုငျသလောကျသိမျးထားဖို့ကအကောငျးဆုံးပါ။ စိုးရိမျနတောတှေ၊စိတျပူနတောတှေ၊သဝနျတိုနတောတှကေို ဖှငျ့မထုတျပဲခဏလောကျသိမျးထားပါ။ မဟုတျရငျဒီအခွအေနကေပိုဆိုးသှားပါလိမျ့မယျ။ခဈြသူအပျေါယုံကွညျမှု မရှိဘူးဆိုရငျ အဲ့ဒီကစလို့တဈလြှောကျလုံးဘာပဲလုပျလုပျရနျဖွဈနရေတော့မှာပါ။ မယုံကွညျမှုတှနေဲ့ ရှဆေ့ကျသှားရတော့မှာပါ။
အဲ့ဒါကွောငျ့ Rs တဈခုမှာ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးရှိဖို့ကအရမျးကိုအရေးကွီးပါတယျ။သူ့ဘကျက သငျ့ကိုပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးရိုးရိုးသားသားပွောပွနတေယျဆိုရငျ အပျေါမှာပွောခဲ့သလိုပဲ သငျ့ခဈြသူကို
ယုံကွညျမှုပေးထားလိုကျပါ။သူ့ဘကျကရိုးသားမှုမရှိဘူး။သူ့အရငျရညျးစားနဲ့စကားပွောထားတာလညျး ဖကျြထားတယျ၊ဖှကျထားတယျ၊တဈခွားတဈယောကျကလာပွောမှ သူ့အရငျရညျးစားနဲ့ ပွနျပွီးဆကျသှယျ စကားပွောဆိုနတောသိရတယျဆိုရငျလညျး တဈဖကျမိနျးကလေးကို သှားပွီးရမျးမနပေဲ သငျတို့နှဈယောကျပဲ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးရငျဆိုငျဖွရှေငျးလိုကျတာ အကောငျးဆုံးပါ။ဒေါသထှကျရငျအမှားပါတတျလို့ ခေါငျးအေးအေး၊သှေးအေးအေးနဲ့ စကားပွောဆိုဖွရှေငျးဖို့လိုပါတယျ။